Andrarezin’ny haino aman-jery : nodimandry,omaly, i Nicolas Ratsimandresy | NewsMada
Andrarezin’ny haino aman-jery : nodimandry,omaly, i Nicolas Ratsimandresy
Anarana tsy afa-misaraka amin’ny tantaran’ny haino aman-jery teto Madagasikara ny an’i Nicolas Ratsimandresy. Nindaosin’ny fahafatesana tampoka, teo amin’ny faha-68 taonany izy, omaly. Maty tampoka, satria voalaza fa mbola niatrika fivoriana manodidina indrindra ny fankalazana ny faha-50 taon’ny fahitalavitra TVM izy, amin’ny maha fioha lefitry ny komity mpikarakara azy.
Teknisianina, mpanatontosa fandaharana, efa talen’ny TVM nandritra ny taona maro ary nampita ny fahaizany tamin’ireo novolavolainy i Nicolas Ratsimandresy. Nirona kokoa tamin’ny fandaharana ara-kolontsaina izy. Nanomboka tamin’ny « Maharitrafo » tao amin’ny RNM, niaraka tamin’i Josette Ramaroson sy Niry Ravelojaona, Nanaraka avy eo ny fandaharana « Talentako », « Mbarakaly », « Maharitrafo », « Tselatra »…
Rehefa mitantara ny niantombohany ireo tarika sy mpanakanto navoakan’ny taona 70, 80, 90, tsy nisy izay tsy nanonona ny anaran’i Nicolas Ratsimandresy. Nandray, nihaino, nikarakara ary nanosika mpanakanto maro tokoa mantsy izy sy ireo mpiara-miasa akaiky taminy tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana. Maro ireo nifanerasera taminy akaiky, nitantara ny fiarahana taminy, tao amin’ny « Facebook ». Notsongainay ny sasantsasany tamin’ireny, ho fahatsiarovana azy:
Tarika Mahaleo: Ontsa ny fo … mitanondrika ny loha … tsy hita izay ambara … Lasa i Nicolas Ratsimandresy na Ra-Niko … Nosafidianay manokana izy nanolotra ny fandaharana tao amin’ny TVM ny 18 desambra 2016 nandritra ny fanokafana ny faha-45 taonanay. Ny tarika Mahaleo dia mitondra ny teny fampiononana ho an’ny fianakaviany manontolo sy ny tontolo ny haino aman-jery malagasy . Mandria am-piadanana ra-Niko.
Gégé Rasamoely : Anisan’ny zokibe nanasoa loatra ny mpanakanto Ra-Niko. Nibosesika tao amin’ny 112, birao niasany avokoa ny bandy kely tamin’izany izay lasa andrarezina ankehitriny, noho ny fisian’ny fandaharana « Talentako ». Toetra nampiavaka an-draNiko izy ilay bandy tsy mba maka lagy fa mandamina mora raha misy tsy mety… Mba handry am-piadanana ny akama e !
Naina Rabearivony : Izy no zokibenay mianakavy. Kapiteny nitarika ny ekipan’ny 112 tao amin’ny RNM nanomboka ny taona 1985.. Birao fiasan’i Nicolas sy i Josette Ramaroson io varavarana 112 io. Birao kely nirefy 9m tora-droa. nefa birao ambohipihaonan’ny rehetra, na mpanentana fandaharana io na artista. Nicolas Ratsimandresy no mitsinjara aminay an’ireo hira sy vazo vaovao nitontona tao amin’ny 112. Olona tena mpitarika i Ra-Niko. Nahay sy naha-fehy ny asany… Olona tsotra sy nahay nampita sy nizara.
Vahombey: Nicolas Ratsimandresy, nanampy ahy nianatra ho mpanentana tao amin’ny RNM, ho teknisiana tao amin’ny TVM, ho mpanakanto sarotiny amin’ny talenta, ho tomponandraikitra ara-politika…
Ifanihy : Tsy nisy Ifanihy raha tsy nisy an’i Nicolas. Izy no nandefa voalohany ny « Ilemena » ho ren’ny vahoaka ny taona 1983… Manja !
Jeanluc Toly : Mandria am-piadanana Nicolas fa tegna tsapanay sady tsy ho hadinonay mandrakizay ny soa zay vitanao taminay tao taminy fandaharana Tselatra.
Milon Kazar : Nicolas Ratsimandresy no anisany ary mety ny ho voalohany mihitsy ,nanao fandaharana momba ny jazz rock sy ny mozika tsy faheno amin’ny onjam-peo andavanandro.
Handrasana eny amin’ny fonenany eny Morarano Andoharanofotsy ny vatana mangatsiakan’i Nicolas Ratsimandresy. Hiala ao ny sabotsy 22 avrily, hoentina eny amin’ny Ekar Malaza Andoharanofotsy ary haterina eny amin’ny fasan-drazany eny Masindray Andramasina. Mirary fiononana ho an’ny fianakaviana, ny namana ary ny mpiara-miasa taminy ny gazety Taratra.
Les journaux Les Nouvelles et Taratra du 22 Janvier 2021 22/01/2021
Les indésirables du 22 Janvier 2021 22/01/2021